भोलि जेठ १८ गते आईतबारको राशिफल हेर्नुहोस्…
May 30, 2020 1734
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ ) – अवसर प्राप्त हुनुका साथै भाग्यले साथ दिनेछ। प्रयत्न गरेका काम सजिलै सम्पादन हुनेछन्। अध्ययनमा राम्रो उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। प्रति’ष्ठित काम सम्पादन गर्ने अवसर आउनेछ। फाइदाको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ। सेवामूलक कामबाट धन’लाभ हुनेछ। प्रतीक्षा गरिएको नतिजा सबल रहनेछ। सन्तान वा अनुयायीले साथ दिनेछन्।
वृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) आवेशमा गरिएको निर्णयले समस्या निम्त्याउने हुँदा व्यवहारमा सजग रहनुपर्ला। ईर्ष्या गर्नेहरूले नै का’ममा अवरोध पुर्याउन सक्छ’न्। आफ्ना योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुहोला। मिहिनेत गर्दा जटिल ठानिएको काम समेत सम्पादन हुनेछ। रोकिएका काममा भने दोहो’र्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला। आफन्तजनले उत्साह जगाउनेछन् र दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ।
मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) – अवसर आए पनि हडबडीले काममा बाधा पुर्याउन सक्छ। विवादा’स्पद काममा जुट्नुपर्दा प्रति’फल प्रभावित हुनेछ। मिहिने’तको फल अरूले हत्याउने चेष्टा गर्नेछन्। काम सम्पादन भए पनि तत्का’ल आम्दानीको आशा नराख्नुहोला। बलभन्दा बुद्धिको उपयोगले लाभ दिलाउनेछ। मिहिनेत गर्दा केही राम्रो परिणाम पनि प्राप्त हुनेछ। उद्यो’ग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ।
कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) -पहिलेको संकल्प पूरा गर्ने समय छ। काममा राम्रो सुरुवात हुनाले सोचेको’ नतिजा हातलागी हुनेछ। बुद्धिको उपयोगले विद्या र धन आर्जन हुनेछ। मिहिनेतले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ। वि’चारले धेरैलाई आकर्षण गर्न सकिनेछ। तर, परिस्थितिको चक्रमा अलम’लिनुपर्दा कार्यसम्पादनमा केही समय लाग्नेछ। अरूको मुख ताक्ने बानीले पनि काममा पछि परिएला।
सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) -आफन्तसँग भेटघाट हुनाले परिवेश उल्लासमय रहनेछ। नयाँ का’मको प्रस्ताव आउनेछ भने साथ दिनेहरू बढ्नेछन्। प्रति’ष्ठित काम गर्दै नाम र दाम कमाउने बेला छ। रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ। तर कामको अवसर आए पनि विशेष भेटघा’ट र शिष्टाचारमा अलमलिनुपर्ला। खानपानको असाव’धानीले स्वास्थ्य प्रतिकूल बन्न सक्छ।
कन्या (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो ) – खर्च लागे पनि लगानी बढाउने अवसर प्राप्त हुनेछ। दिगो योजनाका लागि ऋण लिने समय छ। अवसरको खोजीमा केही दौड’धुप गर्नुपरे पनि उपलब्धि हातपार्न सकिनेछ। शुभचिन्त’कहरूको सहयोग प्राप्त हुनेछ। तर सानो कामलाई अत्यधिक खर्च हुनेछ। बेसुरको निर्णयले पछिलाई समस्या पर्न सक्छ। छर–छिमेकमा असमझ’दारी बढ्नेछ। आफन्त पनि टाढा हुनेछन्।
तुला (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) – आम्दानीका स्रोत सबल देखिए पनि काममा खर्च बढ्नेछ। नपुग रकम कर्जामार्फत जुटाउनुपर्ला। श्रमको उचित मूल्यां’कन भए पनि उपलब्धि हातपार्न समय लाग्नेछ। व्यापार बढे पनि लाभांश कमजोर हुने देखिन्छ। विभिन्न अवसर प्राप्त भए पनि नैतिक प्रतिष्ठा जोगा’उन सजग रहनुपर्ला। आँटेको काममा अरूको मुख ताक्नाले सोचेको प्रतिफल हातलागी नहुन सक्छ।
वृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) – उपलब्धि प्राप्त गर्न केही कुरा त्याग्नुपर्ला। काममा दोहोर्या’एर प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ। मिहिनेतले आंशिक सफल’ता प्राप्त हुनेछ। फाइदा कमै भए पनि आँटेको काम सम्पादन हुनेछ। आफ्नो कम’जोरी बाहिरिनाले आलोचकहरू बढ्न सक्छन्। अरूको उपकार गर्न सकिनेछ। तर धेरै समर्पणले पनि स्वाभिमानमा दाग लाग्न सक्छ। बुद्धिको उपयोगले मात्र लक्ष्य प्राप्त हुनेछ।
धनु (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) मिहिनेत परे पनि भाग्यले साथ दिने हुँदा उपलब्धिका स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ। चुनौती र व्यवधानहरू पार लाग्नेछन्। मिहि’नेत गर्दा लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिनेछ। सामाजिक का’ममा रुचि बढ्नेछ। शुभचिन्तकहरूले पनि राम्रै सहयोग जुटाउनेछन्। फाइदाका स्रोत पहिचान गर्न सकि’नेछ। अध्यात्मभाव जागृत हुनुका साथै धर्मकर्म र परोपकारी काममा प्रवृत्त भइने समय छ।
मकर (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) – व्यस्तता बढ्नेछ भने शरीरमा कमजोरी अनुभूति हुनेछ। गोप्य सूचना बाहिरिनाले काम दोहोर्या’उनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। बेसुरमा काम गर्ने बानीले समस्या निम्त्याउन सक्छ। समयमा गम्भीर नब’न्दा व्यर्थैमा दु:ख पाइनेछ। स्वास्थ्यका लागि व्या’याम तथा आहारवि’हारमा ध्यान पुर्याउनुहोला। कामको चाप बढ्नेछ भने बाध्यात्मक परिस्थितिले पनि अलमल्याउन सक्छ।
कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) – सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्व निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। पहिले’का कमजोरी सुधार्दै जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम दिलाउनेछ। बिछोडिएका आफ’न्तजनसँग पुन: भेटघाट हुनेछ। व्यापारमा राम्रो फाइदा हुनेछ। भौतिक साधन जुट्नाले दिगो योजना प्रारम्भ हुनेछ। परिस्थिति र अनुकूल बनाइ’राख्न व्यवहारमा सजग रहनुपर्ला।
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) आवेशमा गरिएको निर्णयले समस्या निम्त्याउने हुँदा व्यवहारमा सजग रहनुपर्ला। ईर्ष्या गर्नेहरूले नै काममा अव’रोध पुर्याउन सक्छ’न्। आफ्ना योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नु’होला। मिहिनेत गर्दा जटिल ठानिएको काम समेत सम्पादन हुनेछ। रोकिएका काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला। खर्च लागे पनि भौतिक साधन जुट्नाले नयाँ योज’नातर्फ अग्रसर भइनेछ।
Prevआज एकैदिन १८९ जनामा कोरोना भेटियो, कुन जिल्लामा कति ? हेर्नुहोस्
Nextकोरोनाको कारण नेपालमा थप १ जनाको मृ’त्यु, मृतक’को संख्या ७ पुग्यो
के भयो गायक पशुपति शर्मालाई ? लिएर आए यस्तो भिडियो (हेर्नु’होस् भिडियो)